शरिर लचिलो र मजबुत बनाउन के गर्ने ? - Kendrabindu Nepal Online News
शरिर लचिलो र मजबुत बनाउन के गर्ने ?
यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा नै हो, नियमित व्यायाम र योग स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ । योगले शरिरलाई लचिलो र आरामदायक बनाउन सहयोग गर्छ । साथै तनाव, थकान र आलश्य पनि भाग्छ ।
यदि तपाईको शरिरमा लचिलोपन छैन भने यता उति शरिर चलाउन, उठ्ने बस्ने जस्तो सानो सानो काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । जति धेरै शरिर लचिलो हुन्छ त्यती नै शरिर फुर्तिलो र जोशिलो हुन्छ ।
एक्सरसाइजद्धारा शरिरमा लचिलोपन ल्याउन सकिन्छ । एक्सरसाइज गर्ने व्यक्ति स्वाभावमा शान्त र जहिल्यै पनि जोशिलो रहन्छन् । एक्सरसाइजले शरिरको अव्यवस्थित उर्जा मुक्त भएर सन्तुलनमा आउँछ र फ्रेस अनुभव हुन्छ । शरिरको बोसो कम भएर शरिर स्लिम हुन्छ । यदि दिनदिनै आफ्नो खुट्टाको औला छुने गरेमा शरिर लचिलो हुन सहयोग गर्छ ।
शरिर स्ट्रेच गर्नेः
यदि दैनिक शरिर स्ट्रेच गर्ने बानी बसाल्ने गरेमा शरिरमा उर्जा प्रदान गर्छ र शरिर लचिलो बनाउँछ । बिहानको समयमा यो एक्सरसाइज गर्दा फाइदा पुग्छ । यो एक्सरसाइज सुत्नुभन्दा पहिला पनि गर्न सकिन्छ ।
योग र पिलेट्सः
यदि तपाई आफ्नो शरिरमा लचिलोपन ल्याउन गम्भीर हुनुहुन्छ भने तपाईको दिनचर्यामा योग र पिलेट्स समावेश गर्नुहोस् । यो एक्सरसाइजले शरिरको मांसपेशीहरु तन्किन्छ र बलियो हुन्छ । यस्तो गरेमा परिणाम छिट्टै देखिन्छ ।
यदि तपाई धावक वा साइकलिस्ट हुनुहुुन्छ भने पोस्ट एक्सरसाइज महत्वपुर्ण हुन्छ । पोस्ट एक्सरसाइजले जोइन्ट कसिलो बनाउँछ । एक्सरसाइजपछि केही मिनेट पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचले शरिरलाई लचिलो बनाउँछ ।
यो एक्सरसाइजले तपाईको शरिर लचिलो पार्न सहयोग गर्छ । यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो पनि हुन्छ । नियमित रुपमा फोम रोलबाट व्यायाम गरेमा शरिर लचिलो हुन्छ ।
विन्यास योग गर्दा शरिर लचिलो हुन्छ । यो योगको मुद्राको क्रममा मांसपेशी तन्कन्छ र लचिलो हुन्छ । विन्यास योग गर्दा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुगेर पनि शरिर लचिलो हुन्छ । शरिरमा लचिलोपन आउनाले चोटको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।